Izindaba - BXL Creative Won Three Pentawards International Creative Awards
I-BXL Creative Won Three Pentawards International Creative Awards
I-Shu Uemura Limited Isipho Pac ...
Inyoni Yangempela Elungele Ukudla ...
I-Wu Guang Shi Se i-virgi eyengeziwe ...
Ubuhle obungunaphakade bukaDunhu ...
Shredder Skin Care Setha
Amakhandlela amane anezikhathi ezine
I-Gramophone Record Perfume
Uhambo lweQingyan · Ukusetha kokuhamba
IKingfisher Lipstick Clutch
Yuyan Bamboo Khipha
I-Rustic Glam Eyeshadow
Ku "Pentawards Festival" kusuka ngomhlaka 22 - 24 Septhemba 2020, kwethulwe izinkulumo eziqavile. Umklami wezithombe odumile uStefan Sagmeister kanye nomqondisi womklamo womkhiqizo nokupakisha we-Amazon USA Daniele Monti babephakathi kwabo.
Babelane ngemininingwane yakamuva ekwakhiweni futhi baxoxa ngamatimu ahlukahlukene athinta imboni yokupakisha namuhla, kufaka phakathi Kungani Izinto Zobuhle; Ukuqonda Incazelo Yamasiko Yokuqinisa Amabhokisi Nokupakisha; Isizungu soMklamo "Ojwayelekile", njll.
Leli idili elibonakalayo labaklami, lapho ubuciko bungukuhlangana okungenamngcele. Njengomklomelo we-Oscar embonini yokuklama yokupakisha yomhlaba, imisebenzi ewinayo ngokungangabazeki izoba yisiteleka semikhuba yokupakisha yomkhiqizo womhlaba jikelele.
UMnu Zhao Guoxiang, isikhulu esiphezulu se-BXL Creative, umenyiwe ukuthi azokwethula umklomelo wabaphumelele nge-platinum!
Umncintiswano Wokwakhiwa KwePentawards
Ingqikithi yemisebenzi emithathu yeBXL Creative iwine imiklomelo emikhulu.
ILady M Mooncake Gift Box
Umkhiqizo: ILady M Mooncake Gift Box
Idizayini: I-BXL Creative, uLady M
Iklayenti: Ama-Lady M Confections
Isilinda sokupakisha simele ukwakheka kokuhlangana okuyindilinga, ubunye nokuhlangana ndawonye. Izingcezu eziyisishiyagalombili zikaMonconcakes (eziyisishiyagalombili kuyinombolo enenhlanhla enkulu emasikweni aseMpumalanga) namakhothamo ayishumi nanhlanu amele usuku loMkhosi Waphakathi Nokwindla, Agasti 15. Amathoni asebukhosini-aluhlaza okwesibhakabhaka okupakishwa akhuthazwa yimibala yesibhakabhaka sasebusika esiphundu ukuze kuvunyelwe amakhasimende ukuthi abone ubukhulu bamazulu emizini yawo. Ngenkathi izungeza i-zoetrope, izinkanyezi ezifinyiwe zegolide ziqala ukucwayiza njengoba zibamba ukukhanya. Ukunyakaza okunamandla kwezigaba zenyanga kumelela umzuzu wezinyunyana ezivumelanayo zemindeni yaseChina. Ngokwesiko lamaShayina, kuthiwa inyanga iyisiyingi esiqhakaze kunazo zonke ngalolu suku, usuku lokuhlangana kwemindeni.
Ngokuvamile, ukupakisha irayisi kuyalahlwa ngemuva kokudliwa, okuzodala udoti. Ukuze ukhumbule ukuthambekela kokupakisha oku-eco-friendly, umklami we-BXL Creative wenze ukuthi ukupakisha kwelayisi kusetshenziswe kabusha.
Ihlanganisa ngobuhlakani umsebenzi, umhlobiso, kanye nomqondo wokuklama womkhiqizo. I-retro futhi inomhlobiso obalulekile. Ingasetshenziswa futhi njengemihlobiso futhi ingasetshenziswa kabusha ukufeza ukuvikelwa kwemvelo.
Wazalelwa "enhlokodolobha yokwakha" yaseChina -Shenzhen, iBXL Creative ihlala inamathela esimisweni sokuthi Ubuciko Nokusungula kungumthombo wentuthuko yenkampani.
Isikhathi Iposi: Oct-28-2020
Langaphambilini I-BXL Creative Packaging Guizhou Factory Isayinwe ngokusemthethweni!
Olandelayo: Imiklomelo ye-BXL Creative Won Three iF Design